Njirimara na ịdị ukwuu nke Ajọ Ifufe María | Netwọk Mgbasa Ozi
Njirimara na ịdị ukwuu nke Ajọ Ifufe María
Mgbe ọdachi nke Hurricane Irma kpatara, nke a agwụbeghị. Agwaetiti Caribbean ka Irma mebiri emebi na mbido Septemba. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịkwadebe maka ọbịbịa nke ajọ ifufe ọzọ: ndị Maria.
Ajọ ifufe María malitere dị ka oke ikuku mmiri, mana na Sọnde a ọ ghọrọ ajọ ifufe, na-edeba ifufe ihe ruru kilomita 120 kwa awa. Gịnị banyere ajọ ifufe ọhụrụ a?
1 Ajọ Ifufe Maria
2 Aro maka ajọ ifufe
Ajọ Ifufe Maria
Ajọ ifufe a ka bụ Atiya 1 na ọ bụ 200 kilomita northwest nke Barbados. Ka ọ na-agagharị, ọ ga-erute Leeward Islands n'abalị a ma gafee oke ugwu ọwụwa anyanwụ nke Oke Osimiri Caribbean echi.
Oké ifufe a ga-enwe ike ịmepụta nnukwu ebili mmiri na ebibi n'ihi ikuku nke ifufe. Nke a ga - akpata oké osimiri dị elu n'etiti 1,2 na 1,8 mita mgbe m gafere agwaetiti Leeward. Na mgbakwunye, ọ buru amụma oke ọdịda nke ihe dịka 51 centimeters na agwaetiti ndị ahụ, na Puerto Rico na British na US Virgin Islands na abalị Wenesde. Nke a nwere ike bute oke ide mmiri na mbuze na-eyi ndụ egwu.
Elekere hurricane gụnyekwara agwaetiti Martinique, Antigua na Barbuda, Saba na Saint Eustatius na Saint Lucia. Ọ bụ ezie na agwaetiti French nke Guadeloupe ga-anọ na nchedo uhie maka oke ikuku site na etiti ehihie na Mọnde.
Aro maka ajọ ifufe
Ihe kachasị mma n'ọnọdụ ndị a abụghị ịkwaga, kama ịchọ ebe obibi n'ụlọ ma ọ bụ n'ebe nchekwa. Ọ nwere olile anya na Ajọ Ifufe Maria nwere ike iru nke atọ mgbe ọ gafere Guadalupe. Ebili mmiri ahụ nwere ike ịdị elu mita 10 na ikuku ruo 180km / h na mmiri ozuzo 400-millimita.
Ajọ ifufe nke abụọ, José, na-arụkwa ọrụ na Atlantic ma kpalitekwa ịdọ aka ná ntị oké ifufe nke ebe okpomọkụ na ugwu ọwụwa anyanwụ United States.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Njirimara na ịdị ukwuu nke Ajọ Ifufe María
Ka chukwu tinye aka ya
Nke a ọ bụ ihu ihu kachasị njọ nke mgbanwe ihu igwe?
Mgbe Harvey na Irma, na-abịa ugbu a Maria, ajọ ifufe ọzọ